NCA Yoita Kongiresi Yayo Kana Referendamu Yaitwa
Chikumi 13, 2012
Sangano rinorwira kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo rinobva muvanhu, reNational Constitutional Assembly, NCA, rinoti kongiresi rayo yekutsvaga hutungamiri hutsva kana referendamu iri kuda kuitwa munyika yapera.
Sangano iri rinoti rakabuda nechisungo ichi mukupera kwesvondo kuitira kuti hutungamiri huripo hupedzise basa rekukurudzira vanhu kuti vasatambire bumbiro idzva pareferendamu ichaitwa munyika.
Mutauriri weNCA, VaMadock Chivasa, vati zvakabvumiranwa pamusangano uyu kuti hutungamiri huripo pari zvino hupedzise basa rahwakatanga rekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirambe kutambira bumbiro remitemo riri kunyorwa pari zvino, sezvo risina kubva muvanhu.
Sangano iri riri kutungamira chirongwa chekuramba bumbiro iri pasi pedingindira rinoti “Take Charge Campaign”. NCA yakakurudzira veruzhinji kuti vasatambire bumbiro rakanga ranyorwa mureferendamu yakaitwa muna Kukadzi 2000.
VaChivasa vanotiwo imwe nyaya yaita kuti vasendeke musangano mukuru uyu, kushaikwa kwemari, sezvo vaivabatsira nemari vave kusunga homwe dzavo.
VaChivasa varambawo mashoko ekuti danho iri ratorwa senzira yekuti hutungamiri huripo pari zvino hurambe huri pazvigaro.
Sachigaro weNCA, VaLovemore Madhuku, avo vanodzidzisa zvemitemo pa University of Zimbabwe, vaifanirwa kunge vakasiya chigaro chavo pakongiresi yaifanirwa kunge yakaitwa. Asi VaMadhuku vanoti vachasiya basa iri kana basa ravakatanga rapera.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoshanda yakazvimirira, VaCharles Mutasa, vanoti semaonero avo, dambudziko hombe rakatarisana neNCA ndere kushaiwa mari yekuti iite musangano mukuru uyu, sezvo vanobatsira nemari vari kutsigira chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemasangano akazvimirira dzinoti VaMadhuku vari kuratidza kuti munhu anokara masimba nekuramba vari pachigaro, asi ivo vari nynazvi munyaya dzemitemo inofanirwa kunge ichitevedzwa.